खटपटका बीच उद्योग वाणिज्य महासंघको अधिवेशन सुरु, प्रचण्डको यस्तो आश्वासन
काठमाण्डौ । आरोप प्रत्यारोप, खटपट र खुट्टा तानातानका बीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बहुप्रतिक्षित ५१ औं साधारणसभा सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजधानीमा आयोजित एक भव्य समारोहका बीच महासंघको साधारणसभाको औपचारिक उद्घाटन गरेका हुन् । उद्घाटनसत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय...
उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र भाँडभैलो, एशोसिएटमा गोल्छा समूहको कब्जा !
काठमाण्डौ । निर्वाचनको नाममा छलछाम, डरधम्की, लोभलालच र आचारसंहिताको धज्जी उडाउने लगायतका विवादास्पद कार्यमा लागेको आरोप खेपिरहेको शेखर गोल्छा समूहले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एशोसिएटतर्फको सबै भोट कब्जा गरेको आरोप लागेको छ । एशोसिएटतर्फको सबै भोट कब्जा गर्ने रणनीति अनुसार प्रोक्सी मत लिएर नवीकरण नगर्ने, आफ्ना पकेटका...
डाटा सेवामा एनसेलको फड्को, ५८.५५ लाख ग्राहकबाट ८.०३ अर्ब आम्दानी
काठमाण्डौ । निजी क्षेत्रको इन्टरनेट तथा टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल इन्टरनेट सेवा प्रवाह गरी सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने कम्पनी बन्न सफल भएको छ । सरकारी तथ्यांकले इन्टरनेट सेवा प्रवाहबाट हुने आम्दानीमा समेत एनसेलले आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई उछिने देखिएको हो । नियामक नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन...
क्लियरिङ्ग हाउसको सञ्चालकमा अनिलकेशरी शाह नियुक्त
काठमाण्डौ । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको ९९ औं सञ्चालक समितिको बैंठकबाट वाणिज्य बैंक समूूहमा मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल के. शाह संचालक पदमा नियुक्त भएका छन् । शाह हाल नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष समेत रहेका छन् । यसअघि वाणिज्य बैंक समूूहतर्फका उपेन्द्र पौडेल सेवा निवृत भएकोले सो पद रिक्त रहेको थियो । नेपाल...
आनका अध्यक्ष एफएनसीसीआईको चुनाव लड्दै
काठमाण्डौ । नेपाल विज्ञापन संघ (आन)का अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनका लागि केन्द्रिय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । नेपाल विज्ञापन संघ (आन)मा लामो समयदेखि सक्रिय श्रेष्ठले नेपाली विज्ञापन बजार र मिडियाको प्रतिनिधिन्व गर्दै महासंघमा बस्तुगततर्फबाट केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका हुन्...